Folder တွေကို Lock ချပေးနိုင်တဲ့ Software များ — MYSTERY ZILLION
Folder တွေကို Lock ချပေးနိုင်တဲ့ Software များ
June 2007 edited February 2009 in File Request
ဒီထဲမှာ ပို့နည်းနေသေးတော့ အသစ်တစ်ခု ထပ်ယူလိုက်တာပါ..။ ကိုစေတန်ရဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ ပို့ထဲမှာရေးဖို့ကျတော့လည်း ဒါက အပြင်က Software တစ်ခုဖြစ်နေပြန်တယ်..။ XP က Function ကို ယူသုံးတာမှမဟုတ်ပဲ..။
ကျွန်တော်ညွှန်းချင်တာကတော့ DirLock ဆိုတဲ့ဟာပါ..။ Google ထဲမှာရှာသည်ဖြစ်စေ..။
ဒီမှာ http://www.softpedia.com/get/Security/Lockdown/dirLock.shtml ဖြစ်စေ ဒေါင်းလော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
ကဲ တစ်ခြား Software တွေလည်း ကျန်ပါသေးတယ်.. ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး..။ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကိုပေါ့...
အခု Dirlock နဲ့ lock ချထားလိုက်ပြီဆိုရင် ဖွင့်လိုက်ရင် Access denied ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ Window ကခွင့်မပြုသလိုလို လုပ်ပါတယ်..။ မသိသာဘူးပေါ့...။ Software သုံးထားမှန်း...။
အဲဒါပေမဲ့ တစ်ခြား Account တစ်ခုကနေ ကြည့်ပြန်ရင် ရနေပြန်ပါရော..။ :106: ကိုယ့် user account ဖက်မှာသာ lock ချထားပေးနိုင်တာပါပဲ...။
ဒါလေးအရမ်းကောင်းတယ် နော်..flash drives တွေကိုပါ password ပေးလို့ရတယ်။ file နဲ့ folder တွေကို password ပေးလိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားရော.. ဘယ် မှာမှ ရှာမရဘူး С ကလွဲရင်ပေါ့ ။သူ့ software ပါ သူပြန်ဖျောက်လို့ရတယ်။ဒါတော့မလုပ်တတ်သေးဘူး။
အဲလို folder တွေကို လော့ခ်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ် encryption လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလေးတစ်ခုကို ဒီဖိုရမ်က ပညာရှင်များစုပြီး ပရောဂျက်ရေး ၊ open source လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ :67:
bluephoenix wrote: »
Folder ကို Lock လုပ်တဲ့ နည်းပညာကတော့...
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ၃ မျိုးရှိပါတယ်..
၁. Folder Extension
အဲဒါကတော့ Folder ကို system folder များရဲ့ extension ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ဥပမာအားဖြင့် Folder ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Recycle Bin ရောက်သွားတာမျိုး....
အားနည်းချက်ကတော့ WinRar သို့မဟုတ် အခြား explorer များနဲ့ ကြည့်ရင် ရရှိခြင်း...
၂. System Hidden File
အဲဒါလေးကို ဟိုဟိုဒီဒီ XP မှာ ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီ...
လွယ်ကူပေမယ့်.. လုံခြုံမှုကတော့ မရှိဘူးပေါ့... သာမန် user အနေနဲ့တော့ မဆိုးလှပါဘူး..
၃. Chagne File Table
Window ရဲ့ FAT ကိုပြောင်းခြင်းပါ.. တနည်းပြောရင် file တွေမှတ်ထားတဲ့ table စာရင်းမှာ... ဖျောက်လိုက်ခြင်းပါ.. အဲဒီနည်းပညာကို ကျွန်တော် theory ပိုင်းအရသာသိပါတယ်... လက်တွေ့ အခုထက်ထိမသိသေးပါဘူး..
folder ကို ဖိုင်တစ်ခုလိုပဲစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ၄င်းကိုပါ encryption လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းပြီးရေးကြမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူများရေးတာတွေလဲလေ့လာရင်းပေါ့။
folder ကို file တစ်ခုလိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့ အနောက်မှာ system extension ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. encryption လုပ်မယ်ဆိုတာက ကျွန်တော် VB.NET နဲ့ရေးတုန်းက သုံးဘူးပါတယ်. ရမရတောင် မစမ်းလိုက်ရဘူး.. မပြီးခင် hard disk ကြီး ကြွသွားတယ်.. (
ကျွန်တော် folder lock နဲ့ ပတ်သက်ပြီး vb နဲ့ ရေးဘူးပါတယ်... unicode name folder တွေ lock လုပ်လို့မရတာနဲ့ VB.NET နဲ့ပြောင်းရေးရတာပါ..
တက်ဆိုရင်တော့ ဘယ် Software တွေဘယ်လောက် ကာကွယ်ထားကာကွယ်ထား မလုံခြုံဘူးဆိုတာပါပဲ။ ခေတ်နည်ပညာတိုးတတ်လာတာနဲ့ အမျှ လုံခြုံမှုအဆင့်တွေက လျှော့ကျလာပါတယ်။ ဒီတော့ တကယ်လို့ မဖြစ်မနေ အသုံပြုရမယ်ဆိုမှတာ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Password မေ့ခဲ့ရင်၊ Lock ချဖို့မေ့ခဲ့ရင် မိမိရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဒေတာတွေဟာ သူတပါးထံ အလွယ်တကူရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးတာ ရိုးရိုးလေးပါ။ ကျွန်တော်လည်း Floder Lock Software တွေကို အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီး Security မပေးနိုင်းဘူးဆိုတာ သိလားတယ်။ နည်းနည်း Softwae ရဲ့ တည်ဆောင်ပုံ ကိုသိတဲ့သူက အလွယ်တကူ မိမိရဲ့ အရေးကြီး ဒေတာများကို ခိုးယူကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတာ အမြဲ စိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။ ကျွန်တော် ထပ်သတိပေးပါရစေ။ Floder Lock Software များလုံး၀ကို လုံးခြုံမှုမရှိပါခင်များ။
မှန်ပါ့ ကိုမင်းနန္ဒာရေ.. သေချာတာပေါ့.. ကျွန်တော်ဆို သုံးတောင်မသုံးတော့ဘူး.. အမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်တယ်.. နောက်ဆုံးတော့ ပေါက်တယ်.. ဒါကြောင့်မသုံးတော့ဘူး.. flash disk ထဲပဲထည့်ထားတယ်.. ကိုယ်သွားလေရာ သယ်သွားတယ်... ပျောက်ရင်တော့ bye bye ပေါ့.. backup ကိုတော့ လုပ်ရမယ်..
folder lock v.5.6.3
ဒါပေမဲ့ .......Crack Key လေးလုပ်ပါအုံးဂျာ......
သူငယ်ဂျင်း ဒို့ရေ ကူညီကြ ပါအုံး.........:101:
window ရဲ့ default utility (cacls.exe) နဲ့လဲ ပိတ်ချင်တဲ့ user ကိုပိတ်ထားလိုရတယ်လေဗျာ
အဲဒါကို ဒီမှာ ရေးထားတယ်လေ.....:D:D:D
ကျွန်တော်လိုချင်တာက ဒီ user ထဲမှာပဲ lock ဖြစ်နေတာပါ အဲ့လိုမျိူး software ရှိ်လားတော့မသိဘူးဗျ
အဲ့folderကိုsoftwareနဲ့lockချထားရင် အဲ့ folder ကိုဖွင့်လိုက်ရင် password တောင်းတာမျိုးပေါ့ဗျ......သိသူများတစ်ချက်လောက်ပေးကြပါ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးခင်ဗျာ :6:
ရှိတယ် emoလေးရ အလွယ်တကူလိုချင်ရင်စေတန့်ဆီမှာတောင်း... ဒါမှမဟုတ်အစ်ကိုနဲ့တွေ့ရင်ပေးမယ်။ software နာမည်က folder lockbox ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်ရင်တော့ အောက်မှာယူလိုက်
အဲဒီဆော့ဝ်လ်တော်တော်ကောင်းတယ် search လုပ်ပြီးရှာလဲမတွေ့ဘူး။ hidden ဖော်ပြီးရှာလဲမတွေ့ဘူး။ safe mode နဲ့တတ်လဲမတွေ့ဘူး။ သူ့ software run ပြီး password ရိုက်ထည့်ပေးမှ ပြန်ပေါ်လာတာမျိုးပေါ့။ အားနည်းချက်တော့ရှိတယ်မပြောတော့ပါဘူး...စမ်းသုံးကြည့်ပါတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ software လေးသိကြလားမသိဘူးခင်ဗျ။
Lock Folder XP ဆိုတယ့် Software လေးပါ။
အရမ်းသုံးလို့ကောင်းပြီး safe လဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီးစမ်းကြည့်တာ မတွေ့ဘူးခင်ဗျ။
Features တွေလဲစုံပါတယ်ခင်ဗျ။ Hotkey, Alarm စသည်ဖြင့်ပေါ့။
Defragment လုပ်ရင်တောင် lock လုပ်ထားတယ့် folders တွေ၊ files တွေ မရွေ့ပါဘူး။
အသုံးပြုပုံကိုတော့ နောက်ထက်ပြောပြပေးပါ့မယ်။ :67:
အောက်က Link တွေမှာ ဒေါင်းလို့ရတယ်အကိုတို့ရေ။
[URL="http://www.mediafire.com/file/gxzgetdjfoy/Lock Folder XP 3.6.rar"] Media Fire [/URL]